အဆိုပါဖွင့်လှစ် STL - ဖိုင် FORMAT - 2019
ယင်း STL နှင့်အတူပွင့်လင်းဖိုင်တွေ
AMD ၏အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးဂရပ်ဖစ် adapter ATI Radeon HD 2600 Pro ကိုများအတွက်ပံ့ပိုးမှု 2013 ခုနှစ်တွင်ရပ်စဲခံခဲ့ရပေမယ့်သေးသူ့ကိုပယ်ရေးသားဖို့။ အဓိက - အရှင်ကိရိယာ၏ပုံမှန်လည်ပတ်ရေးအတွက်, နောက်ဆုံးပေါ်ရရှိနိုင်ပါ drivers တွေကို Download လုပ်ပြီး Install လုပ်ပါ။ ဒါဟာယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာဆွေးနွေးကြလိမ့်မည်လုပ်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပါ။
အဆိုပါ Radeon HD 2600 အတွက် ATI Pro ကိုများအတွက်ယာဉ်မောင်းရှာဖွေရေး
နည်းလမ်းများစွာအတွက်အနီရောင်ကနေဗီဒီယိုကဒ်များမှန်ကန်သောစစ်ဆင်ရေးသေချာ, ငါတို့သည်သူတို့ကိုတစ်ဦးချင်းစီကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော။ အများဆုံးရိုးရှင်းသောငှါ, အာမခံထိရောက်သောနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရာမှ, ဒါပေမယ့်အမြဲအလုပ်လုပ်ပုံစနစ်မ - ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆိုပြုထားရှာဖွေရေး options များအများဆုံးယုတ္တိနိုင်ရန်အတွက်တည်ရှိသည်။
ငါးနှစ်ထုတ်လုပ်သူနေဆဲတွေ့နိုင်ပါသည်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်အပေါ် Radeon HD 2600 အတွက် ATI Pro ကိုများအတွက်ဆော့ဖ်ဝဲကို update မထားဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း။ တကယ်တော့ထောက်ခံမှုစာမျက်နှာ AMD ၏ - ပထမနှင့်မကြာခဏသင်ယာဉ်မောင်းများအတွက်လိုအပ်မှသာနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ရဲ့စတင်ရန်ကြပါစို့။
စာမျက်နှာပေါ်ပြီးတာနဲ့ "ယာဉ်မောင်းများနှင့်ပံ့ပိုးမှု"Little က, ကဆင်း scroll
ပိတ်ပင်တားဆီးမှုမှတက် "စာရင်းထဲကသင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းကို Select လုပ်ပါ"။ ဒါကြောင့်တာရှည်, သူမ၏စီးရီးနှင့်မိသားစုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်, တိကျတဲ့မော်ဒယ်ရှာအံ့သောငှါရိုးရှင်းစွာရှာဖွေရေး box ထဲမှာဂရပ်ဖစ်ကဒ် ATI Radeon HD 2600 Pro ကို၏အမည်ကိုရိုက်ထည့်, လက်ဝဲ mouse ကို button ကို (LMB) ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ရွေးချယ်ရေးအတည်ပြုရန်နှင့် button ကို click မပေးခဲ့ပါဘူး "Send".
ထို့နောက် operating system ကိုသင့်ရဲ့ version ကိုနှင့်၎င်း၏စွမ်းရည်ကိုရွေးပါ။
မှတ်ချက်: Windows အတွက်, ဒါပေမယ့်လည်း Linux တို့အတွက်မဟုတ်မှသာ AMD ၏ website တွင် download ပြုလုပ်ရရှိနိုင်ကားမောင်းသူ။
မနှစ်မြို့ဖွယ်ယခုအချိန်တွင် Windows 8.1 ကို 10 တို့အတွက်ဆော့ဖ်ဝဲမရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမဲ့အဲဒီ OS ဗားရှင်း၏သုံးစွဲသူများရိုးရှင်းစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပမာ၌ပြစ်မှားမိပါလိမ့်မည်သည့်ကို Windows 8, ကနေတစ်ဦးကို item ကိုရွေးချယ်ပါ။
အဆိုပါစနစ်၏နာမတျော၏လက်ဝဲလိုအပ်တဲ့ဗားရှင်းနဲ့နည်းနည်းအတိမ်အနက်ကိုမှသေးငယ်တဲ့အပေါငျးလက်ခဏာ၏ပုံစံအတွက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်စာရင်း Expand နှင့်စာနယ်ဇင်း "ဒေါင်းလုပ်"။ အနည်းငယ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတစ်ဦးထက်ပိုမကြာသေးမီ beta ကိုယာဉ်မောင်းကို download လုပ်ပါရန်ဖိတ်ခေါ်နေကြတယ်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အကြံပြုကြပါဘူး။
အချိန်ကြာမြင့်စွာလွန်ခဲ့ကြောင်းကိုဇန်နဝါရီလ 21, 2013 မှာ, - တူညီသောစာမျက်နှာတွင်သင်သည်နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်း၏နံပါတ်, executable file ကို၏အရွယ်အစားနှင့်၎င်း၏လွှတ်ပေးရန်၏နေ့စွဲတွေ့နိုင်ပါသည်။ အနည်းငယ်သင်အသေးစိတ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်ကိုအောက်တွင်။
ဒေါင်းလုပ်ကိုအလိုအလျောက်စတင်သို့မဟုတ် (သင့် browser နှင့်၎င်း၏ဆက်တင်ပေါ်တွင် မူတည်. ) အတည်ပြုချက်ကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြီးစီးအပေါ်သို့ double click နှိပ်ခြင်း LMB အားဖြင့် file ကို run ။
သေးကားမောင်းသူဖိုင်များ, သို့မဟုတ်ပိုကောင်းဇီပ်ဖို့ folder ကိုရွေးပါ, နဂိုအတိုင်းလမ်းကြောင်းကိုစွန့်ခွာ။
စာနယ်ဇင်း extracting စတင်ရန် "Install".
လာမယ့်ခြေလှမ်းခုနှစ်, installation wizard ကိုဘာသာစကား (ရုရှားကို default ဖြစ်ပါသည်) နှင့်ကလစ်နှိပ် select လုပ်ပါ "Next ကို".
option ကိုရွေးချယ် setting ဆုံးဖြတ် "မြန်" (အလိုအလျောက်) သို့မဟုတ် "အကောက်ခွန်" (အပြောင်းအလဲတချို့ကိုလုပ်ခွင့်ပြု) ။
ဒီနေရာတွင် program ကို install လုပ်ဖို့ directory ကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူကအရမ်းပြောင်းလဲပစ်ဖို့မ သာ. ကောင်း၏။ သတ်မှတ်ချက်, စာနယ်ဇင်းသတ်မှတ်ဘဲလျက် "Next ကို".
ယင်း၏ပြီးစီးပေါ်၌ထို option ကိုယခင်ကရှေးခယျြခဲ့လျှင် "အကောက်ခွန် Install"ဒါဟာမဆိုဆော့ဖျဝဲအစိတ်အပိုင်းများကိုသင် system ကို install လုပ်လိုသောဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ယာဉ်မောင်းများနှင့်ပူးတှဲ software ကိုကလစ်ကိုစတင် install လုပ်ဖို့ "Next ကို",
ယာဉ်မောင်းတပ်ဆင်ပြီးစီးပေါ်၌ကလစ် "ပြီးပြီ" ပြတင်းပေါက်ပိတ်ဖို့ရန်
နှင့်ယခုကွန်ပျူတာကို restart ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Yes" ကို, ဒါမှမဟုတ်အကြာတွင်ဒုတိယ option ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်။
သငျသညျ, ထိုတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေ ATI Radeon HD 2600 Pro ကိုများအတွက်ယာဉ်မောင်းကို download တွေ့မြင်နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်နိုင်သကဲ့သို့ - အချို့တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိပါတယ်ပေမယ့်တာဝန်ကအတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။ မှုဘာသာရပ်ဂရပ်ဖစ် adapter ကိုမထောက်ပံ့ကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုကျနော်တို့ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းကတာဝန်ရှိသူတဦးက AMD ၏က်ဘ်ဆိုက်ကနေပျောက်ကွယ်သွားစေခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပြည်တွင်းရေးသို့မဟုတ်ပြင်ပ hard drive ကိုမှဒေါင်း setup file ကို save လုပ်ဖို့အကြံပြုပါသည်။
Method ကို 2: ကော်ပိုရိတ်ဆော့ဖျဝဲ
AMD ၏ Catalyst Control Center ကို - က၎င်း၏ယာဉ်မောင်းကို update, ဤကိစ္စတွင်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအရာကို, သင်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်စွမ်းဆောင်ရည်အချို့ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ခွင့်ပြုသည်နှင့်အသောကုမ္ပဏီ-developer ၏လျှောက်လွှာ။ ဒီကော်ပိုရေးရှင်းဖြေရှင်းချက်ဟာ ATI Radeon HD Pro ကို 2600 အပါအဝင် software ကို install သို့မဟုတ်အပ်ဒိတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်နှင့်အတူ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ဘယ်လိုသင်ယူဖို့ကျနော်တို့အရင်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့ဒါကြောင့်အောက်ပါဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါပွီ။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: AMD ၏ Catalyst Control Center ကို အသုံးပြု. ဗီဒီယိုတစ်ကားကိုကဒ်နှင့်ယာဉ်မောင်း updates များကို Installing
Method ကို 3: အထူးဆော့ဖျဝဲ
အဘယ်သူ၏လုပ်ဆောင်နိုင်မှုနည်းလမ်းများစွာအတွက်စီးပွားဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲဖို့ထက်သာလွန်ဖြစ်ပါတယ်အများအပြားအစီအစဉ်များရှိပါသည်။ အဆုံးစွန်သောယာဉ်မောင်းထုတ်လုပ်သူရဲ့ထုတ်ကုန်ဖို့တစ်ခုတည်းကိုသာကြည့်ရှုခွင့်ပြုပါက, Third-party developer များအနေဖြင့်ဖြေရှင်းချက်အားလုံးကွန်ပျူတာပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောအရံပစ္စည်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်။ ဤရွေ့ကားအစီအစဉ်များပျောက်ဆုံးနေခြင်းနှင့်ခေတ်မမီတော့ဒရိုင်ဘာကိုရှာဖွေတဲ့ system scan ကလုပ်ဆောင်ပြီးတော့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး install သူတို့ကိုအလိုအလြောကျသို့မဟုတ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့ကိုဆက်ကပ်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည် ATI Radeon HD 2600 Pro ကိုများအတွက်ဗီဒီယိုအပါအဝင်ယာဉ်မောင်းရှာပြီး install လုပ်ဖို့ကူညီပေးပါ။
အသေးစိတ်: Program ကိုအလိုအလျှောက်ယာဉ်မောင်းတပ်ဆင်ရန်
ကျနော်တို့ DriverPack Solution နှင့် DriverMax မှသတိထားရမှာအကြံပြုပါသည်။ နှစ်ဦးစလုံးအစီအစဉ်များကိုအခမဲ့နှင့်အတူတူပင်အချိန်နှင့်လိုအပ်သော software ကိုမှာနေစဉ်ထောက်ခံဟာ့ဒ်ဝဲ၏အရှိဆုံးကျယ်ပြန့်ဒေတာဘေ့စနှင့်ပြည့်စုံဖြစ်ကြသည်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်သင်သည်ထိုသူတို့သုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုအသေးစိတ်လမ်းညွှန်ချက်များရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
DriverPack Solution နှင့်အတူ Installing ယာဉ်မောင်း
ဂရပ်ဖစ်ကားမောင်းသူကို install လုပ်ဖို့ DriverMax အသုံးပြုခြင်း
ID သို့မဟုတ်ဟာ့ဒ်ဝဲ ID ကို - တစ်မူထူးခြားသောအရေအတွက်သည်နှင့်ပြည့်စုံကွန်ပျူတာအားလုံးဟာ့ဒ်ဝဲအစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်၌ ချိတ်ဆက်. သောကိရိယာ။ တွေ့မှပဲတစ် devaysa များ၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုကြည့် "Device Manager"။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဂရပ်ဖစ်ကဒ် ATI Radeon HD 2600 Pro ကို ID ကိုတန်ဖိုးကို:
PCI VEN_¬1002 & ¬DEV_¬9589
ယခုငါတို့ဒီနံပါတ်ကိုသိသော, သင် ID ကိုယာဉ်မောင်းများကရှာဖွေနိုင်စွမ်းပေးသောအထူးပြုက်ဘ်အရင်းအမြစ်များတဦးတည်းကိုသွားသင့်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ site တွင်သင်ဤရိုးရှင်းသော, ဒါပေမယ့်အလွန်အဆင်ပြေပြေနဲ့ထိရောက်သောနည်းလမ်းများ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုအပေါ်တစ်ဦးပြည့်စုံလမ်းညွှန်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ပိုများသော: ID ကိုသုံးစက်ကိရိယာများအားဖြင့်ယာဉ်မောင်းရှာရန်
အားလုံးအသုံးပြုသူများကိုဖြစ်နိုင်သမျှနီးပါးမည်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်သင့်လျော်သောယာဉ်မောင်းရှာပြီး install လုပ်ဖို့ဆိုတာသိနှင့် operating system ကိုသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် tools တွေကိုသုံးပြီးမဟုတ်ပါဘူး။ "Device Manager"Window များပေါ်တွင်တည်ဆောက်ပါကသင်ရုံအနည်းငယ်ကလစ်ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖျော်ဖြေဖို့ခွင့်ပြုသဖြင့်, သာလိုအပ်ချက်တစ်ခုအင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုရှိရန်ဖြစ်ပါသည်။ AMD ၏ထံမှ corporate software ကိုကသတ်မှတ်ထားပေမယ့်ပြဿနာတွေမပါဘဲဖြစ်နိုင်, ဂရပ်ဖစ်ကဒ်နှင့် ATI Radeon HD 2600 Pro ကိုသောဟာ့ဒ်ဝဲအစိတ်အပိုင်း၏ကျန်းမာရေးကိုသေချာရပါဘူး။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ဘယ်လိုသတင်းအချက်အလက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင်သီးခြားဆောင်းပါးအတွက်ကိုပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျမွငျနိုငျသကဲ့သို့, ယာဉ်မောင်းရှာပြီး install လုပ်ဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်ဂရပ်ဖစ် adapter ATI Radeon HD 2600 Pro ကိုလုပ်ကိုင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထိုအသေး, ရွေးချယ်မှုရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုရှိခြင်း၏ကြားမှထဲမှာ, preference ကိုတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက Web-သယံဇာတနှင့် / သို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲပေးဆောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သာဒီချဉ်းကပ်မှုဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲအပြည့်အဝလိုက်ဖက်မှုအာမခံနှင့်လုံးဝဘေးကင်းလုံခြုံသည်။ မျှော်လင့်ဤဆောင်းပါးကိုသင်တို့ဆီသို့အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့သည်နှင့်ကျန်းမာရေးကဒ်ကိုသေချာစေရန်ကူညီပေးခဲ့တယ်။
ဗီဒီယို Watch: Tutorial: Snowflake2beaded earrings Простые серьги Снежинки2из бисера мастер-класс (စက်တင်ဘာလ 2019).